विर्तामोडमा ‘टेम्पो एम्बुलेन्स’ सेवा प्रारम्भ
सप्तरीमा झन्डै तिन सय सक्रिय संक्रमित, १८ जना अस्पताल भर्ना
बाग्लुङमा शय्या र अक्सिजनको अभाव
नेपाल सुपर लिग: पोखराको रोमाञ्‍चक जीतसँगै चितवन बाहिरियो
हिन्दु धर्मसँग जोडिएका केही यस्ता परम्परा वा काम छन्, ती कुरा ध्यान दिदा भगवान्को कृपा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। ती कामको प्रभावले गर्दा कहिलै दुख वा पीडाको सामना गर्नु नपर्ने विश्वास गरिन्छ। घरमा धन धान्यको कुनै पनि कमी नहुने धार्मीक विश्वास छ।
जानिराखौँ ती काम:
जुन घरमा पुजा पाठसँग सम्बन्धित साना कुरामा ध्यान राखिन्छ र नियमित रुपमा भगवानको सेवा गरिन्छ, त्यस्तो घरमा कुनै दुख पीडा नहुने विश्वास रहेको छ। पुजासँग जोडिएका शास्त्रीय निमयमको ध्यान राखेमा सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने तथा सुख समृद्धि आउने धार्मीक विश्वास छ।
तुलसीलाई शक्ति स्वरुपा मानिने गरिन्छ। जुन घरमा तुलसीको पुजा हरेक दिन हुने गर्दछ, उसको घरमा केही कुराको कमी नहुने विश्वास गरिन्छ। तुलसी रोप्दा घरमा प्रवेश गर्ने हावा पनि अमृत समान हुने गर्दछ। जुन व्यक्तिले बिहान चाडै उठेर तुलसीलाई जल चढाउछ, उसमाथि सधै विष्णु भगवानको कृपा रहने विश्वास गरिन्छ। गोबर गाईको गोबरलाई निकै पवित्र मानिने गरिन्छ। महाभारतको अनुशासन पर्वका अनुसार गाईको गोबर महालक्ष्मीको निवास हुने गर्दछ। त्यसैले जुन ठाउँमा गाईको गोबरले पोत्ने गरिन्छ, त्यो ठाउँ पवित्र हुने गर्दछ। साथसाथै माता लक्ष्मीको कृपा पनि मिल्ने गर्दछ।
माता लक्ष्मीलाई खुसि पार्न गर्नुहोस् यी काम, हुनेछ धनको वर्षा
सनातन हिन्दू धर्ममा शुक्रवारलाई लक्ष्मी र वैभव–विलासको दिन मान्ने गरिन्छ । आज माता लक्ष्मीलाई खुसी पार्नका लागि पनि गरिन्छ । यसै अवसरमा आज हामी माता लक्ष्मीलाई खुसी पार्न अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं, जसले गर्दा तपाईको जीवनमा सधैं सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुनेछ ।
– भनिन्छ माता लक्ष्मी जुनसुकै समय मापनि घरमा आउन सक्छिन । तथापि साँझको समयमा घरमा लक्ष्मीको प्रवेश हुने भएकाले साँझमा माताको नाममा दीप प्रज्वलन गर्नुलाई शुभ मानिन्छ ।
– शुक्रवार बिहानै शुद्ध मनले गाईलाई रोटी खुवाउँदा पनि लक्ष्मी प्रसन्न हुने मान्यता रहेको छ ।
– शुक्रवारको दिन सम्भवत घर सरसफाई गर्नुहुँदैन यसले घरमा लक्ष्मीको वास नहुने बिश्वास गरिन्छ ।
यसका अलावा अरु के गर्ने?
– घरमा तुलसी रोप्ने र नियमित पुजा गर्ने
– पानीमा चन्दन मिसाएर स्नान गर्ने
– चाँदी या चन्दनको टुक्रालाई नदीमा बहाउने
– सुगन्धित वस्तुहरुको प्रयोग गर्ने
– बिहिवार लक्ष्मी पुजा
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमवार, पुस २७, २०७७ १३:५९:३८
डा. सिग्देल : जसको आत्मविश्वासमा उभिएको छ कोसी कोभिड अस्पताल
अण्डरवर्ल्ड डन छोटा राजनको कोरोनाको कारण निधन
शिल्पाको १ वर्षकी छोरीलाई कोरोना संक्रमण, बनिन् भावुक
कोरोनाबाट एकै परिवारका तीन दाजुभाइको मृत्यु
यी १० लक्षण भएकाहरु सँधै असफल हुन्छन्
राम्रो मान्छे किन लामो समय बाँच्दैन ?
भोली हनुमान जयन्ती, ‘यो एउटा कार्य गर्नुस नकरात्मकता हराउने छ’